निकितालाई बोर्ड अध्यक्षबाट बर्खास्त गर्न मन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशन – रिपोर्टर्स नेपाल
निकितालाई बोर्ड अध्यक्षबाट बर्खास्त गर्न मन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशन
२०७५ माघ २१ गते प्रकाशित, l १३:२२
काठमाडौं, २१ माघ । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेललाई अनुशासन नमानेको र पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै बर्खास्त गर्ने तयारी थालेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री बाँस्कोटाले पौडेललाई बर्खास्त गर्नेगरि मातहातका अधिकारीलाई निर्देशन दिईसकेका छन् ।
आइतबार बोलाइएको चौमासिक बैठकमा पौडेल नआएपछि मन्त्री रुष्ट बनेका हुन्। पदीय जम्मेवारीको ख्याल नगर्नेले कसरी काम गर्न सक्छ् ? भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पौडेललाई तत्काल बर्खास्त गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयले पौडेललाई बर्खास्त गर्नुपुर्व लिखित स्पष्टीकरणसमेत सोध्न लागेको छ । सम्भवतः आज वा भोलिभित्रै उनलाई पत्राचार गरिने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियारले निकिता पौडेललाई पत्र काट्दै, यस्तो छ आरोप
चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेललाई अख्तियारले पत्र काट्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार बोर्डको अध्यक्ष बन्न उनले ठूलो रकम खर्चिएको भन्ने कुराहरु यसअघि नै आएकाले यसबारेमा छानबिन गर्न पौडेललाई अख्तियारले पत्र काट्न लागेको हो ।
हल सञ्चालक तथा चलचित्र निर्मात्री पौडेल बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै उनीबारे अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तत्कालिन् सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले पौडेलबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिएर उनलाई अध्यक्ष बनाएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारले पनि यो विषयमा वास्तविकता के हो भनेर ? छानबिन गर्नेगरि बोर्डकी अध्यक्ष पौडेललाई पत्र काट्न लागेको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७४।८।२५ गते बोर्डको अध्यक्षमा चलचित्रकर्मी पौडेललाई नियूक्त गरेको थियो । र, २०७४।८।२९ गते पौडेलले पदभार गरेकी हुन् ।
‘म जासुस होइन’
बिप्लव वार्तामा आउनुअघि पुरा गर्नुपर्ने शर्तहरु
बास्कोटालाई शर्माको काउण्टर– हलेदो भनेर चिनिसकेपछि…